Hoos udhaca ku yimi shaybaarka 'Chow Mix': Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato - Taranka
Ma arki kartaa saaxiibtinimo iyo ciyaar Labrador dib u habeyn iyo mid madax banaan oo ka fog Chow Chow saaxiibbo ahaan Ma qiyaasi kartaa isweydaarsiga labadan eey?
Waxay noqon kartaa mid ka mid ah lamaanayaasha ugu yaabka badan adduunka eeyga naqshadeeyaha, laakiin isku dhafka Lab-Chow ayaa hubaal ka dhigaya inay shaqeeyaan.
Maqaalkani, waxaan ka wada hadli doonnaa xaqiiqooyin muhiim ah oo ku saabsan isweydaarsigan, sidoo kale loo yaqaan Chabrador . Waa kuwan dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan helin iskudhafkan.
Waa maxay isku-dhafka Lab Chow?
Muxuu u eg yahay isku darka Lab Chow?
Waa maxay shakhsiyadda Chow Lab Mix?
Sideed jacayl ugu muujisaa isku darkaaga Lab Chow?
Dhibaatooyinka caafimaad ee suurtagalka ah ee Lab Lab Chow
Tababbarka isku darka Chow Lab
Halkee laga helaa isku-darka Labrador Chow
Miyaad heshaa Chabrador?
Isku darka Lab-Chow waa iskutallaabta jiilka koowaad ee a Labrador dib u habeyn (Shaybaarka) iyo a Chow Chow .
Nooca waalidkiis ayaa jiray muddo dheer, laakiin eeygan ayaa ah mid ku cusub goobta.
Marka laga hadlayo asalkooda, waxa aan ilaa hadda ognahay ayaa ah in isugeyntan markii hore lagu cunay Mareykanka.
Waxay si dhakhso leh ugu kasbanayaan milkiilayaasha milkiilayaasha aawadood muuqaal qalafsan, muuqaal jilicsan .
Haddii ay jirto hal eray oo lagu sharraxayo waxa uu yahay Lab Chow Mix, waxay ahaan lahayd lama saadaalin karo .
Labrador iyo Chow Chow waa laba nooc oo isku mid ah; runti, waxay noqon karaan uun kuwa iska soo horjeedka saxda ah ee midba midka kale marka loo eego muuqaal ahaan iyo dabeecad ahaanba.
Natiijo ahaan, xitaa eeyo yaryar oo ka imanaya isla qashin ayaa laga yaabaa eeg oo u dhaqan si ka duwan midba midka kale.
Sida nooc kasta oo iskutallaab ah, habka ugu wanaagsan ee wax looga barto isku-darka 'Chow Chow iyo Lab' waa waalidiintiisa.
Aynu fikir fiican ka helno halka ay iskutallaabtan ka timid annaga oo fiirineyna taariikhda Shaybaarka iyo Chow Chow.
Chowgii hore ee Shiinaha
Chow Chows waxay asal ahaan ka soo jeedaan Mongolia iyo Waqooyiga Shiinaha, halkaas oo sidoo kale loogu yeero songshi quan , macnaha Eyga 'puffy-libaax' .
Shiinaha dhexdiisa, eeyahaas qalafsan ayaa qaybtooda caddaaladda ku leh monikers, oo ay ku jiraan hei shi-tou ('Eyga carrab-madow'), xiang gou ('Eey orso'), iyo Guangdong gou ('Eyga Canton').
Dooro ayaa ah mid ka mid ah eyda ugu da'da weyn adduunka waxaana loo maleynayaa inay yihiin awoowayaasha eyda nooca Spitz-ka ah.
Eeyo u eg Chows ayaa lagu arkay dheriga boqortooyada Han iyo farshaxanno soo jiray ilaa 206 BC ilaa 22 AD. Iyaga ayaa lagu hiddeeyay ugaadhsiga ugaadhsiga iyo hantida ilaalada , iyo, waqtiyo kale oo nasiibdarro ah, eeyahaas ayaa sidoo kale loo adeegsaday cunto.
Chow Chows sidaas ayuu ahaa jecel yahay oo la qiimeeyo Shiinaha gudaheeda in boqortooyo la sheegay inuu leeyahay ilaa 5000 Chows intii uu xukunka hayay.
Dabayaaqadii qarnigii 18aad, baayacmushtariyadii Ingiriisku waxay eeyo ka keeneen Shiinaha ilaa Yurub.
Chow Chow ayaa magaceeda ka helay a ereyga pidgin-English ganacsatadu waxay u adeegsan jireen wax kasta oo Bariga ka imanaya.
Asalka Labrador Retriever
Labrador Retrievers ayaa jiray illaa iyo markii Qarnigii 16aad . Waxay markii hore ku dhasheen eeyo caawiya kalluumeysatada.
Awoowayaasha casriga ah ee Lab ayaa ka soo jeeda jasiiradda Newfoundland, Kanada. Shaybaarada ayaa ka soo farcamay eeyga loo yaqaan 'St. John's eeyaha biyaha ah' waxaana keenay Yurub dadka waaweyn ee Ingiriiska.
Qarnigii 18-aad, eeyaha waaweyn ayaa badanaa la dhaqday haad biyo ugaarsi iyo ugaarsi .
Sannadkii 2017, Labrador Retriever ayaa kaalinta ugu sarreysa ka galay liiska Ereyga Kennel Club ee eeyaha ugu caansan Mareykanka.
Labradors ayaa caan ku ah caqli, saaxiibtinimo, iyo guud ahaanba dabeecad weyn .
Erey deg deg ah eeyaha naqshadeeyaha
Sidaan horay u sheegnay, isku darka Labrador-Chow waa eey naqshadeeye cusub , inkastoo taariikhda dheer ee waalidkeed ay ku abtirsadaan.
Waxay qaadataa laba nooc oo saafi ah si loo sameeyo eey naqshadeeye, kaas oo badanaa loo abuuro inuu isku daro qaababka ugu fiican ee waalidkeed. Tani waa xaqiiqdii kiiska isku-dhafka 'Chow-Lab'.
Qaar ka mid ah dadka jecel eeyga naqshadeeye waxay ku andacoodaan in eeyahaani ay caafimaad qabaan sababtoo ah kala duwanaanta hidde-wadaha.
In kasta oo aysan jirin daraasado la taaban karo oo lagu xaqiijinayo sheegashadan, haddana nashqadeeyahan 'taranka' sida 'Chabrador' si kastaba ha noqotee waxay ku raaxaystaan ​​maalmahan sababtoo ah badanaa muuqaal qurux badan iyo dabeecad la aqbali karo .
Nasiib darrose, AKC uma aqoonsana eeyahaas inay yihiin noocyo kala duwan.
Lab Chow eey ( xigasho )
Isku darka 'Chow Chow Lab' wuxuu u ekaan karaa isku dhafka waalidkiis ama wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo muuqaal ah oo ka mid ah waalidkood.
Taasi waa sheyga leh isweydaarsiga; marna ma saadaalin kartid sida ay noqon doonaan.
Aynu hubino Labrador iyo Chow Chow si aan fikrad uga helno sida ay iskudhafkan u ekaan karaan.
Labrador waa a eey weyn culeyskiisu wuxuu u dhexeeyaa 55 illaa 80 rodol (24 illaa 36 kgs) wuxuuna cabi karaa inta u dhexeysa 21 illaa 24 inji (54 illaa 62 cm).
Shaybaarada waxay leeyihiin waji macaan u eg naxariis, hadal saaxiibtinimo . Ku imaada midabbo kala duwan sida jaalle, madow, iyo shukulaato, dhogorta ayaa gaaban oo dhumuc leh. Koodhadhkoodu waa jilicsan yihiin oo u adkaysta cimilada si looga ilaaliyo biyaha.
Dhinaca kale, Chow Chows ayaa ah eeyo yar yar ama dhexdhexaad ah , oo taagan 17 ilaa 20 inji (43 ilaa 50 cm) oo dherer ah oo culeyskiisu yahay 45 illaa 70 rodol (20 illaa 31 kgs).
Waxay leeyihiin jaakado qaro weyn oo qalafsan taas oo ku imaan karta madow, buluug, qorfe, kareem, ama casaan.
Chows badankood waxay leeyihiin hadal aan fogayn , in kasta oo ay u egyihiin muuqaal Dhegahoodu waa saddex geesood waxayna u taagan yihiin si qumman. Muuqaal u gaar ah Chow Chow waa carrabkiisa buluug ama madow.
Intee ayuu la egyahay Chow Chow Lab Mix?
Iyadoo lagu saleynayo noocyada waalidkeed, Lab Chow Mix waa mid yar ama dhexdhexaad dhexdhexaad ah, miisaankiisuna yahay 50 illaa 70 rodol (22 ilaa 31 kg) iyo cabirka inta udhaxeysa 18 ilaa 24 inji (45 ilaa 60 cm) dheer.
Inta badan Chabradors waxay leeyihiin a muuska dheer iyo madax la mid ah Labrador. Badanaa waxay leeyihiin indho bunni ah laakiin qaarkood waxay yeelan karaan indho buluug ah.
Qaar badan oo ka mid ah isku-dhafkaas waxay leeyihiin carrabka-buluug-madow ee waalidkood Chow Chow.
Eeyahaani waxay yeelan karaan jaakado midabyo kala duwan leh, laga bilaabo madow, caddaan, iyo midab cad, casaan iyo bunni. Dabadoodu badanaa dheer oo qalafsan .
Dabeecadaha Labrador iyo Chow Chow aad ayey uga duwan yihiin midba midka kale, haddii uusan ahayn ka soo horjeedka saxda ah.
Isku darka Lab Chow wuxuu qaadan karaa astaamaha labada waalid midkood si aad uhesho eeyaha yar yar ee 'Chabrador yaa' jecel yahay habsiinta iyo kalgacalka iyo eey kale oo isla qashinka ka soo jeeda oo ah meel fog iyo keyd .
Waa kuwan fiidiyowga Labrador iyo Chow Chow eeyo isku dhafan oo ciyaaraya:
Aynu si dhakhso ah u eegno dabeecadda Shaybaarka iyo Chow Chow si aan fikrad fiican uga helno habdhaqanka Lab Chow.
Saaxiibtinimada, firfircoon ee Labrador
Labrador wuxuu helaa A aagga dabeecadda. AKC wuxuu qeexayaa Shaybaarada sida saaxiibbo kacsan oo xamaasad sare leh .
Iyagu waa saaxiibbada ugu fiican orodka, socodka, iyo dabaasha waxayna leeyihiin tamar iyo isboorti si ay u noqdaan saaxiibkaaga jimicsiga.
Shaybaarada ayaa loo yaqaan iyaga sirdoonka , sidoo kale, waxaana loo isticmaalaa sida caadiga ah eeyaha shaqeeya iyo eyda adeegga .
Meelahaas bilaa daalka ah ayaa inta badan fuliya waajibaadyo ka caawinaya milkiilayaashooda nolol maalmeedkooda.
Madaxa banaan, ilaaliya Chow Chow
Chow waxaa badanaa lagu sifeeyaa inuu leeyahay dabeecad sharaf leh. Waxay noqon karaan ka digtoonaada shisheeyaha lagamana dulqaadan karo xayawaanka kale.
Kuwani waa daacad eeyaha xadka u leh inay ahaadaan dhul. Waxay noqon karaan dagaal badan haddii aan la tababbarin ama la dhexgelin da 'yar.
Si kastaba ha noqotee, xitaa iyada oo leh dabeecadda waalidkeed, astaamaha isku dhafka Lab Chow waxay ku xirnaan doontaa inta tababarka iyo is dhexgalka bulshada eeygan wuxuu ku dhacaa da'da hore.
Ilaa iyo inta si sax ah loo tababaray, waxaad filan kartaa iskutallaabtaada Chow Labrador inay noqoto eey saaxiibtinimo leh, daacad ah taasi ilaalinta qoyskeeda .
Dhamaanteen waxaan dooneynaa in eeyahayagu ay helaan nolol farxad leh oo caafimaad leh sidaa darteed waa inaan siino dheelitirnaan ku habboon jacaylka, daryeelka, iyo nafaqada habboon.
Iskutallaabta Lab Chow ayaa u baahan xoogaa dadaal dheeri ah marka laga hadlayo daryeelka, laakiin shaqadu xaqiiqdii waa u qalantaa iyada oo leh noocyadan isweydaarsiga ah ee jecel.
Ku haynta Chabrador-kaaga mid weyn
Ha la yaabin haddii noocani isweydaarsigu u baahan yahay qurxin ugu yaraan hal mar usbuucii maaddaama Labrador iyo Chow Chow labaduba ay leeyihiin jaakado u baahan in la siiyo fiiro gaar ah.
Haddii eeygaagu dhaxlo jaakadda shaybaarka, a cadayasho todobaadle ah waa inuu ku filnaadaa. Si kastaba ha noqotee, haddii xayawaankaaga xayawaanka ahi leeyahay dhogorta qaro weyn ee Chow Chow, markaa jaakaddiisu waxay u baahan tahay fiiro gaar ah. Tixgeli cadayashada dhogorteeda ugu yaraan saddex jeer toddobaadkii inay ka ilaaliso inay isku xirnaato.
Cadayga joogtada ahi wuxuu kaloo ka ilaaliyaa dhogorta inay sameysmaan dermo, taas oo xanuun ku yeelan karta xayawaankaaga.
Khibradahan isku dhafan daadinta xilliyeed , laakiin filo dhogorta eygaaga inay si joogto ah u daadiso sidoo kale. Diyaarso faakiyuum lagu nadiifiyo timaha kuuskuusnaanta roogaaga iyo alaabta guriga.
Maxaa lagu quudinayaa geesahan la jecel yahay
Labradors iyo Chow Chows waxay leeyihiin baahiyo kaladuwan marka loo eego cunnadooda.
Halka Shaybaarada lagu yaqaan iyaga cunto xumo oo u janjeera inay cunaan wax kasta oo iyaga la siiyo, Chow Chows waxay u baahan yihiin in lagu quudiyo taxaddar yar.
Inta badan Chows ayaa leh calool xasaasi ah taariikhdooda darteed. Sidaan horeyba u sheegnay, eeyadan waxaa loo tixgaliyay inay yihiin cunnadii shiinaha qadiimiga ahayd sidaa darteed waxaa lasiin jiray cunno la mid ah xoolaha kale ee xoolaha sida digaagga iyo lo'da. Xulashada waxaa la quudin jiray soy, bariis, iyo, mararka qaarkood, kalluun.
Cunnadan awgeed, eeyahaani waxay caadeysteen cunista cunnooyinka si fudud loo shiidi karo, sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay dhibaatooyin kala kulmaan dheefshiidka borotiinka ama hilibka. Cunto borotiin sare leh ayaa ku siin karta Chow Chow’s dhibaatooyinka maqaarka .
Marka laga hadlayo isku darka Labrador Chow Chow, halkan waxaa ku yaal tilmaamo kooban oo ku saabsan sida iyo waxa lagu quudiyo.
Tixgeli inaad quudiso eeygaaga cunno yar laakiin raashin badan. Cun isaga saddex ilaa afar jeer maalintii .
Isku qas. Barootiintu waa shuruud ku jirta cuntada eeyga, gaar ahaan eeyaha firfircoon sida Chow Lab. Waad ku dari kartaa khudrad cusub ama bariis.
Tixgeli ilaha kale ee borotiinka. Ukunta iyo jiiska waa ilaha borotiinka u fiican eeygan.
La hadal dhakhtarkaaga xoolaha ku saabsan waxa cuntada ayaa ugu fiican eeygaaga. Maskaxda ku hay in baahiyaha sii kordhaya ee eeyku ka duwan yihiin eyga weyn. Baahida nafaqada ee eey firfircoon sidoo kale way ka duwanaan doontaa mid gadaal loo jiido, sidaa darteed had iyo jeer waxaa fiican inaad iska hubiso dhakhtarka xoolaha marka ay timaado cuntada eeygaaga.
Maxay yihiin shuruudaha jimicsigooda?
Sidee uun mashquul u noqon laheyd markaad go'aansato inaad yeelato Labrador Chow Chow hybrid?
Jawaabtu waa: aad iyo aad. Filo inaad qarash gareyso ugu yaraan saacad maalin kasta ciyaarta firfircoon leh iskudarkaaga Lab Chow.
Waxay u baahan yihiin saacaddan jimicsiga maalin kasta si ay ugu sii ahaadaan qaab jireed oo wanaagsan.
Jimicsiga ayaa sidoo kale ka caawin doona iyaga inay isticmaalaan dhammaan tamarta ay ku kaydsan yihiin.
Orod, ciyaar ciyaar, iyo dabaasha waa hubaal waxqabadyada ardaygaagu ku raaxeysan doono.
Uma baahnid in eeygaagu caajiso maxaa yeelay tani waxay ka dhigeysaa inay u nugul yihiin dabeecadaha xun sida in aad ku calaacasho alaabta gurigaaga ku jirta.
Marka hubi inaad marwalba diyaar u tahay inaad la ciyaarto eygaaga si aad ugu ilaaliso jir ahaan iyo maskax ahaanba.
Noocani waa nooc eey cusub oo naqshadeeye ah mana jiraan wax badan oo laga qoro oo ku saabsan arimahooda caafimaad. Si aad fikrad fiican uga hesho caafimaadka eeygan, waxaa waxtar leh in la eego xaaladaha isku-dhafankan ay yeelan karto dhaxli ka soo jeeda waalidkeed:
Dhibaatooyinka indhaha sida cataract iyo glaucoma
Qanjirka 'autoimmune thyroiditis'
Daryeelka saxda ah iyo booqashooyinka joogtada ah ee dhakhtarka xoolaha ee baaritaanka, Chabrador wuxuu leeyahay celcelis noloshiisa 11 ilaa 13 sano .
Tababar isugeyntaas isagoo da 'yar waa waajib buuxa. In kasta oo ay caqli yeelan karaan sida waalidkood Labrador, haddana sidoo kale waxay leeyihiin u janjeera sare inay dhaxlaan Chow Chow ’ dabeecad madax adag .
U tababbarkooda markay weynaadaan xaqiiqdii maaha mid lagula talin karo. Sugitaan aad u dheer ayaa laga yaabaa inay soo saarto dabeecad aan loo baahnayn sida gardaro iyo firfircoonaan .
Iskutallaabta Labrador Chow ee aan tababbarka lahayn ayaa laga yaabaa inay dhaxasho dabeecad dhuleed Chow oo ay ka digtoonaato shisheeyaha iyo xayawaannada kale ee aysan aqoon u lahayn. Isdhexgalka hore ee bulshada ayaa ku dhejin kara dhaqankan biqilka.
Filo eygaaga inuu leeyahay feejignaan dhexdhexaad ah markaa tababarku waa inuu noqdaa mid xiisahooda leh waqti kasta. Ha u oggolaan in isku-dhafkaaga Chow Lab Mix uu kugu jiido indhihiisa eey-eey. Waa inaad ahaataa mid taagan oo adag wali deji markaa ma ku dhiirrigalin doontid dabeecadda dagaal eeygaaga.
Tallaabada ugu horreysa ee eey wanaagsan oo caafimaad qabtaa waa inaad ka hesho a breeder sumcad leh .
Bixiyeyaasha leh Labrador Chow eeyo isku dhafan ayaa laga yaabaa inay ku adkaato helitaankooda, in kastoo.
Waxaad baari kartaa kuwaan soosaarayaasha ah ee diirada saaraya caruurtooda waalidkood.
Shidan Xulashada Xiddigaha (Kentucky)
Kaynta Dreamland (Texas)
Soo Celinta Sky River (Washington)
Sheybaarka 'Lab Chow' wuxuu isku daraa kharashka eeyaha $ 1000 . Tani waa sababta oo ah labada waalid ee waalidkood waxay u muuqdaan inay yihiin dhinaca qaaliga ah. Qiimaha eeyadan yaryar waxay sidoo kale ku xirnaan doontaa abtirsiintooda waalidkood.
Haddii aadan dhib ka qabin inaad guriga u qaadato eey ka weyn, sidoo kale waad sameyn kartaa korsasho urur samatabbixin ama hoy.
Eeyaha samatabbixintu waxay u muuqdaan inay ku yimaadaan qiimo jaban waxaadna awoodi doontaa inaad guri u siiso eey aan lahayn meel uu tago.
Waxa laga yaabaa inaan la saadaalin karin marka loo eego muuqaalkiisa iyo dabeecaddiisa, laakiin, guud ahaan, waxaad filan kartaa isku-dhafkan inuu noqdo saaxiibtinimo, kalgacal iyo wehel ciyaar leh .
Haddii aad go'aansato inaad hesho isku-darka Lab Chow, hubi inaad waqti kugu filan ku qaadato tababarka si loo hubiyo in dhaqan wanaagsan laga helo xayawaankaaga.
Waxaad sidoo kale dooneysaa inaad ahmiyad gaar ah siiso baahidooda nafaqo oo aad hubiso inay yihiin jir ahaan firfircoon si looga hortago caajiska iyo dabeecadaha wax duminaya.
Ma leedahay Chabrador kuu gaar ah? Waxaan jeclaan laheyn inaan maqalno sheekooyinkaaga! Nooga sheeg iyaga faallooyinka.
Sida Loo Doorto Ey Yar oo Raadinta iyo Samatabbixinta ah
cananaaska waa u fiican eyda
magacyo yar yar oo eeyaha ah ee ragga
noocyada pitbulls sawiro
Magacyada eyga yar ee cute lab